Vondrona EOROPEANA Ny Vola Euro An-davitrisa Eoropeana Mandeha Amin'ny alalan'ny Fiaran-dalamby | Save A Train
Home > Travel Europe > Vondrona EOROPEANA Ny Vola Euro An-davitrisa Eoropeana Mandeha Amin'ny alalan'ny Fiaran-dalamby
Fotoana famakiana: 3 minitra(Last Nohavaozina: 19/09/2020)
Ny EU dia nanolo-kevitra ny hampiasa vola mihoatra ny 100 miliara amin'ny lamasinina hanamafisana ny fivezivezena eoropeanina, Fampiasam-bola ity dia mitambatra amin'ny famatsiam-bola miankina sy tsy miankina. tanteraka, ny fitambaran'ny fampiasam-bola dia hihoatra € 4,5 lavitrisa. Ny fampiasam-bola ho avy amin'ny alalan'ny famatsiam-bola vondrona antsoina hoe mampifandray Europe toerana. Raha afohezina, ny famatsiam-bola ho tonga avy any amin'ny vondrona vitsivitsy. Ireo vondrona ireo dia ahitana pirenena, tsy miankina sy ireo banky mpampiasa.
Famatsiam-bola dia hanampy hanatsarana ny Eoropeana Travel rail Network. koa, ny fampiasam-bola dia hanampy hampitombo ny Safidy hafa solika ho an'ny fiaran-dalamby. Fanampin'izany, ny famatsiam-bola dia hanamboatra ny lalana izay aotra émission fitaterana.
Tetikasa dia hifantoka amin'ny fototry ny tambajotra Eoropeana mandeha. €719.5 million is for the Eoropa rail Network. € 99,6 tapitrisa ho an'ny lenta lalana fitaterana. koa, € 78,9 tapitrisa dia ho an'ny fampandrosoana seranana. Ary € 44.7 tapitrisa any afovoan-tany dia ho an'ny renirano.
Flagship fandraisana an-tanana fa ny famatsiam-bola ho voasaron ahitana;
mitombo ny hafainganam-pandehan'ny fiarandalamby eo Danemark sy ny Alemaina.
Hanavao ny lalamby tao Slovenia
Làlan-dalamby anelanelan'ny Italia sy Frantsa
manampy 340 fa mamaly ny peo noho ny elektrika fiara
Mampifanaraka renirano noho ny entana fitaterana
Cologne any Copenhagen Lamasinina
Dresden ho any Copenhagen Lamasinina
Nuremberg any Copenhagen Lamasinina
Araka ny sasany loharanom-baovao, Europe dia vola fanampiny € 37 Billion ao amin'ny fiaran-dalamby orinasa. Izany dia hanome vola bebe kokoa ny olona sy ny vola miditra asa. Ny Eoropeana rail Network dia noho ny hampitombo ny fahaizana sy maharitra. Ireto ny sasany amin'ireo tetikasa ny € 37 Billion dia ampiasaina ho an'ny;
Dusseldorf ho any Hamburg Lamasinina
Bonn any Berlin Lamasinina
Heidelberg ho any Munich Lamasinina
1. Gotthard Base Tionelin'i
Raha tonelina ity dia 17 taona, izany ihany no nisokatra ho an'ny Eoropa mandeha amin'ny 2016. Noho ny Alpine tendrombohitra, noraisiko 2,400 mpiasa ny fandavahana ny alalan '. Ny tionelina efa ho ny halavan'ny dia 57 KM, manao izany ny tionelina lehibe indrindra eto amin'izao tontolo izao. Noho ny haben'ny ny tonelina, ny vidin'ny no € 11 lavitrisa.
Ity tonelina mampifandray amin'ny faritra avaratr'i Italia amin'ny Southern Alemaina izay manan-danja roa ao amin'ny firenena Eoropeana Travel tontolo iainana. Any aoriana, 240 entana fiarandalamby dia hampiasa izany tonelina. Noho ny tonelina, ny freights no hisolo ny 2 tapitrisa isan-taona nandehanany kamiao. Kamiao tsy maintsy handroaka ny tendrombohitra, ary miandry eo amin'ny fiantraikany filaharam-be. Vokatr'izany, ny freights, izay handeha Tamin'ny taona uninterrupted 160 KM isan'ora dia nisafidy.
Trento ho Lake Garda Peschiera Lamasinina
Bolzano Bozen ho Lake Garda Peschiera Lamasinina
Bologna ho Lake Garda Peschiera Lamasinina
Venice ho Lake Garda Peschiera Lamasinina
Zavatra tsy raikitra rohy tionelina lava indrindra no ho naroboka tionelina eto amin'izao tontolo izao. The tunnel will link Denmark with the German Island of Fehmarn. Ny fitambaran'ny vidin'ny tonelina ity rohy ity dia € 7 miliara. Ity rohy ity dia hikapa ny fiaran-dalamby dia fotoana eo anelanelan'ny Stockholm ary Hamburg ny 2 ora. Ny entana indostrian'ny eo Alemaina, Danemark, ary Soeda nahazo tombony tonga nirohotra avy amin'io rohy, Azo antoka fa izany no kokoa ny Eoropeana mandeha.
Stuttgart ho any Hamburg Lamasinina
Antwerp ho any Hamburg Lamasinina
Leipzig any Hamburg Lamasinina
Bonn any Hamburg Lamasinina
3. Eoropa Travel Railway Network Connection Project VDE 8
VDE 8 angamba no lehibe indrindra lalamby toeram-panorenana any Alemaina. Manatsara ny fitaterana ny tetikasa manerana an'i Alemaina. Noho ny habeny sy ny teknolojia ny VDE 8 tsipika eo Berlin sy ny Munich ny vidin'ny € 10 miliara.
Ticket Bookings in 3 minitra
Famandrihana tapakila ny fiaran-dalamby in for European mandeha? Nahoana raha 3 minitra eo amin'ny toerana mora indrindra mba hahitana ny tapakila ho an'ny lalana. Login ny ny toerana ankehitriny ny boky fiarandalamby. Tapakila azo vola ho amin'ny fomba maro, anisan'izany ny tsara sy ny karatra.
No tianao mba hiraketana ny lahatsoratra bilaogy amin'ny toerana, dia tsindrio eto: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Feu-invest-1-billion-euros-european-travel%2F - (Ampidino nidina hamangy ny Embed Code)
Raha te-ho tsara fanahy ny mpampiasa, dia afaka hitarika azy ireo mivantana an-pikarohana pejy. Eo ity rohy ity, dia hahita ny làlana malaza indrindra fiaran-dalamby – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside manana ny rohy ho an'ny teny Anglisy fipetrahana pejy, fa isika ihany koa dia manana https://www.saveatrain.com/in_routes_sitemap.xml, ary afaka hanova ny / ao amin'ny / ru na / ja sy ny maro hafa fiteny.
#foto-drafitr'asa #vola europetravel Train Travel
Fiaran-dalamby Alemana, Travel Europe